बंगलादेशबाट रेमडेसिभिर सहयोग ! – Namaste Dainik
August 27, 2020 NamastedainikLeaveaComment on बंगलादेशबाट रेमडेसिभिर सहयोग !
काठमाडौँ — कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रेमडेसिभिर बंगलादेशले नेपाललाई सहयोग गर्ने भएको छ । बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत डा. वंशीधर मिश्रले नेपाल पठाउन पाँच हजार भाइल रेमडेसिभिर जुटिसकेको जानकारी दिए ।
‘औषधि सहयोग चाहियो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिठी आएको थियो । औषधिको व्यवस्थापन भइसक्यो, हवाई उडान छैन, गाडीबाट नै बिहीबार विराटनगर पुग्छ,’ डा. मिश्रले कान्तिपुरलाई टेलिफोनमा भने । औषधि व्यवस्था विभागले यति फर्मा, सिनर्जी र भियोभिस लाइफ साइन्सेस औषधि आयातकर्तालाई भारतबाट औषधि ल्याउने अनुमति साउन ३१ गते दिए पनि उनीहरूले पूर्ण मात्रामा ल्याउन सकेका छैनन् । विभाग र आयातकर्ताबीच भएको सम्झौताअनुसार दुई हजार भाइलका दरले तीन कम्पनीबाट ६ हजार भाइल औषधि ल्याउनुपर्ने थियो । आयातकर्ताले ७२ घण्टाभित्र ल्याउने भनेका थिए ।
संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालले औषधि मागिरहेका छन् तर माग पूरा भएको छैन । विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीका अनुसार यतिले भारतको सिप्ला कम्पनीबाट ल्याउने भनेको रेमडेसिभिर ल्याएकै छैन । ‘दुई हजार भाइल औषधि ल्याउने भनेको भियोभिसले २ सय मात्रै ल्याएको छ भने माइलनबाट ल्याउने भनिएकामा पाँच सय २८ भाइल आएको छ,’ उनले भने, ‘के कारणले हो थाहा भएन ।’ ल्याएका औषधि भने कोभिड अस्पतालमा पठाइसकिएको उनले बताए ।
औषधि आयातका लागि कानुनी रूपमा सहज हुँदा पनि विभागले बंगलादेशबाट ल्याउन चाहने आयातकर्तालाई पन्छाएर भारतबाट औषधि ल्याउन अनुमति दिएको थियो । अहिले भारतबाट ल्याउने भनिएको रेमडेसिभिर त्यहाँ निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
मेरो पेटमा प्रहरीको बच्चा छ,उसैले गर्दा मेरो श्रीमानसंग पनि सम्बन्ध बिग्रियो म घरकि न घाटकि भय भन्दै सम्झनाले गरिन पा-सो लागायर देहत्यग ।
अरिङ्गाल पोल्न रुख चढ्दा लडेर मृत्यु !
बिना मगरको मन्त्रालयमा,सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार !